ဘုန်းကျော်: 10/01/2010 - 11/01/2010
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး ၈၈ ပီးမှာ တက်လာတယ်။ ၁၀-နှစ်ကြာပြီးတေ့ာ-
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ ဖြိုးရေးကောင်စီလို့ဆိုပြီး ပြောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခါ ၁၀-နှစ်ကြာပြီးတော့
မြန်မာပြည်...ငြိမ်ဝပ်၊ အေးချမ်းတာကို ကြံ့ခိုင်အောင်တည်ဆောက်မယ်...။ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အတွေးအယူကိုပေါ့။
စကားလုံးတွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ကို ပြနေတယ်...။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, October 31, 2010
ကျနော့် မိန်းမက ပြောတယ်။ နင်က အရက်သမားတဲ့...။ နေ့လည်းသောက် ညလည်းသောက်။
ဟ....အရက်သမားဖြစ်ဖို့က လွယ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ပိုက်ဆံကုန်တယ်၊ အချိန်ကုန်တယ်။ အရက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က ၁၀-နှစ်လောက် သောက်ရတယ်။ ပြီးမှ ဒီရာထူးရတာကွလို့ ကျနော်ပြန်ပြောတယ်။ ဒီလောက်ခါးတဲ့ အရသာကို ခံစားချက်မရှိဘဲ ဘယ်သူတောင်းစားက သောက်မှာလဲ...။
နင်...မသောက်ဘူးပဲနဲ့ ပေါက်ကရ မပြောနဲ့လို့ ကျနော်ပြောတယ်...။
အရက်သမားဆိုတာ သစ္စာရှိတယ်။ အရက်လည်းမသောက်၊ ဆေးလိပ်လည်းမသောက်တဲ့လူတွေက စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်တွေများတယ်ကွ...လို့ ကျနော်က ဆင်ခြေပေးတယ်။
အရက်သောက်ဖို့ တိုက်တွန်းတာ မဟုတ်ဘူး။ အရက်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ကို နားလည်ဖို့ ဒီလိုရေးတာပါ။
အရက်သမားတွေက စောက်ရှုးတွေမဟုတ်ဘူးကွလို့...မိန်းမကို ဒီလိုပြောရဲတဲ့ သတ္တိရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ညဘက်မိန်းမက အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားတယ်။ ကျနော် ဘယ်မှာ သွားအိပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ဒါက နှစ်ခါပြန်ခံစားရတဲ့ အရက်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ...။
Myanmar's Style (Vol 1, No 5) PDF
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, October 25, 2010
Aahara Sazaung (ISSUE - 116)
မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး မီးထွန်းပွဲ (Perth)
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆိုရင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိ့မယ်။ ဒီနည်းလမ်းသာလျှင် အကောင်းဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ပြည်သူများ၊ အတိုက်အခံအင်အားစုများ၊ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ထောက်ခံကြမည်ဆိုလျှင် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို အချိန်တိုတိုတွင်းတွင်း ရောက်ရှိပါလိ့မည်။
ဒုတယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ပြီး လက်မှတ်ထိုးပြီးပီပဲ ထားပါစို့။ လက်မှတ်ထိုးပြီးရင် တကယ်ကော ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ပြီလား။ အစိုးရတစ်ရပ်ပြောင်းပြီလား။ လက်မှတ်ထိုးတာလောက်ဆိုရင်တော့ သိတ်မမိုက်ဘူး။
မထိုးခင်မှာ အားလုံးထောင်ထဲ ပြန်ဝင်သွားရင်လည်း ဒုက္ခ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ခေတ်တုံးက လက်မှတ်ထိုးပြီး အင်္ဂလိပ်ဆီကို တင်ပြ၊ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်။ အခု ဒုတိယပင်လုံညီလာခံမှာလက်မှတ်ထိုး နအဖကို တင်ပြ၊ နအဖကပယ်ချတဲ့ထုံးစံရှိနေတာကို အားလုံးသိပါတယ်။
ဒုတိယပင်လုံညီလာခံမှာ ကြားဖြတ်အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့ဖို့ လက်မှတ်ထိုးကြရင် အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလိ့မယ်။
ကိုစိုးမိုး Face Book မှယူသည်။
၈၈-မျိုးဆက်(ဆစ်ဒနီ) မှ သြစတျေးလျ လ၀က ၀န်ကြီးထံသို့ စာတင်
Minister for Immigration and Citizenship Affairs
Burmese Community’s Request should be revokedaPerformance Visa to the Military Junta’s Artist Khant Si Thu ifavisa already issued to perform ataFestival in Australia
1. We understand that culture is important to the development ofacountry and social values of its people. In that regard, artists can change the thinking of the people for either good or bad depending on the role they took in public life.
2. The above-mentioned artist gave the excuse that his role in making of the film, ‘Aharyone Oo-Hmar Phoo Thi Kyar’ (literally meaning The Budding of the Lotus at Dawn) was the result of him and other artists being coerced into it by the regime. The film was mainlyadistortion of Burma’s history and the propaganda to mislead future generations. Whatever the reason, the artist’s complicity in the making of the film should not be taken lightly asavalid excuse.
3. It is all under the grand scheme of the military for its perpetuate rule in Burma. The regime not only has avoided Australian Government’s sanctions imposed on them and their families by issuing their children passports with false names in order to study in Australia. They are sending monks, Pastors, writers, singers and actors as their emissaries to win over the Burmese community living overseas. Their malicious scheme was exposed in the United States and the visas of the artists and his colleagues were revoked. (The press cutting of the matter is attached herewith for your information).
4. Since the visit of this group of artists sympathetic to the military is nothing but the source of division and instability among the Burmese community living overseas, we would like to request the Minister thataperforming visa oravisa of any category should not be issued and ifavisa of any kind has already issued, should be revoked in accordance with the Migration Act of Australia for future.
5. To our knowledge, the above-mentioned artist was invited to perform at the festival to be held at Marrickville Town Hall in Sydney.
88 Generation Students in Australia.
Contact: Soe Lwin 0412 387 263
Tin Myint 0412 908 322
Ni Tun 0414 218 129
Lin Aung 0412 016 350
Toe Toe 0402 438 145
Soe Soe Oo 0416 207 825
Nyi Nyi Soe 0430 494 928
Copy to: Department of Foreign Affairs and Trade
Moemaka Reporter 002, October 9, 2010.
The tour began in August 2010 and encountered numerous protests by the Burmese community in the US. Asaresult, U Ei Tha Ri ya (the monk who sponsored the visas for the band) filed personally on 7th October to the US government that he was withdrawing his sponsorship.
Ko Nyi Nyi Aung, an active activist from the Burmese community in Washington DC Metro area, told Moemaka that the United State’s Immigration Service immediately revoked their P1 visas of all of the 10 Burmese from the band because the band had caused controversy among Burmese American Community due to its inclusion of the junta’s propaganda actress, and the its sponsorship by the Burmese monk had been withdrawn.
According to the immigration rules and regulation, all the band members lost their visitors’ status and are considered illegal visitors. It was learnt that not only they were to leave the country effective immediately but also they will be prohibited to enter the US for the foreseeable future. The list of revoked visas include: Soe Moe (Manager), Min Maw Kun (Actor), Ye Lay (Actor), Leonard Maung Maung Lwin (Musician), Petric Maylar (Musician), Ye Phone (Musician), Tutkey (Musician), Wyne Su Khaing Thein (Actress), L. Sai Zee (Singer) and Rebecca Win (Singer).
“Since from the beginning of their tour, there were many discussions made within Burmese community to avoid protests but they (the band and the their supporters) never backed down and continued their tour. Due to our political principle and belief, we had to protest them as the instruments of the Burmese junta. However we were not making any personal attacks to the members of the band. Finally it was due to the solidarity of Burmese American community, collective wisdom of the Burmese monks’ community and last but not the least the policy of the US government to impose political sanction on the Burmese regime and its accomplices, the matter came to the end peacefully and lawfully” said Ko Toe Lwin, one of the active activists and dissidents of NLD (LA) (an exile branch of Burmese opposition party of Burma, NLD led by Aung San Suu Kyi) now living in San Francisco Bay Area.
This is first time in 20 years after the Burmese regime bloody coup in Burma that the Burmese American community publicly denounced the Junta’s propaganda activity and its supporters, and resulted in the expulsion of the regime’s artists.
Professional Body Gurad နေဇော်ထွေးအား(ပျောက်ကြားဝတ်စုံနှင့်တွေ့ရစဉ်)
ဂလိမထိုးပဲ တော်တော်ရီရတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် အရီရဆုံးဟာသသတင်းလို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါ။
"ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးနေဇော်ထွေးဟာ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့က မီးလောင်ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးသွားတယ်လို့ နေပြည်တော် ကကကြည်းမှ အရာရှိတဦးက ပြောဆိုပါတယ်"
သေဆုံးသူ ဗိုလ်ကြီးနေဇော်ထွေးရဲ့ အရည်အချင်းက နဲတာမဟုတ်။ Professional Bodyguard တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်လာရင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိသူလို့ ထင်မိတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရဲ့  One of the Best Body Guards ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ယူဆတယ်။ တကယ်တွေ့တော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ဓာတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့ ခံတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်သောက်သုံးမကျတဲ့ ဘောဒီဂတ်လဲဗျာ။
"သူ့မိန်းမနဲ့ သူနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ကြတော့ မိန်းမဖြစ်သူက သူ့အိပ်နေတုန်းဓါတ်ဆီလောင်းပြီး မီးရှို့တယ်။ ဆေးရုံမှာ ၃ ရက်လောက် ကုသပေမယ့် မရတော့ပါဘူး"
ဓာတ်ဆီလောင်းတာနဲ့ အိပ်ယာက နိုးရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ သူများတွေဆိုရင် အသံကြားတာနဲ့နိုးနေပြီ။ အရက်အလွန်အကြွံသောက်တာလား၊ မှုးယစ်ဆေးဝါးကောင်းနေတာလား။ သာမန်လူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ အသံကျယ်ကျယ်ကြားတာနဲ့ နိုးပြီ။ ကိုယ်ပေါ်ကို ဓာတ်ဆီအရည်တွေကျတာတောင် မနိုးဘူးဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ။
ကျနော့်သုံးသပ်ချက်က Professional body guard တစ်ယောက်က ဓာတ်ဆီလောင်းတာတောင်မနိုးဘူးဆိုတော့ သေတာတောင်နဲသေးတယ်။ ဒါကို ကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေမပြောနဲ့ သူ့တပည့်တွေတောင် သုံးစားမရဘူး။
"ဗိုလ်ကြီးနေဇော်ထွေးဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့အတူ လာအို ခရီးစဉ်က အပြန်မှာ မိန်းမနဲ့စကားများ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး သူဟာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်နဲ့ ဗိုလ်မှူးလစာရရှိနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်"
မိန်းမနဲ့ကျနော်ခဏခဏစကားများဖူးပါတယ်။ ဓာတ်ဆီနဲ့လောင်းဖို့နေနေသာသာ ရေနဲ့တောင်မပက်ရဲဘူး။ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ဘော်ဒီဂတ်ကြီးကို သူ့မိန်းမက အဲဒိလောက်တောင် တင်းရလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တရားသေပြောနိုင်တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်က ဒီလောက်သတ္တိရှိရဲတာကိုအံ့သြတယ်။
နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက ဒါက လူသတ်မှုပဲ။ တခါတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေရဲ့ သား ဘိုးတော်လိုလို၊ ဘာလိုလိုကောင်က ဘော်ဒီဂတ်တစ်ယောက်ကို အသေသတ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ဒီတစ်ယောက်လည်း သူတို့မိသားစု လုပ်ကြံတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
Source Irrawaddy Blog
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, October 18, 2010
သူပုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ ထောင်ဒဏ် နှစ်ပေါင်း (၂၀)
မဲ့ဆောက်က မြန်မာအတိုက်အခံအင်အားစုကို ဆက်သွယ်လို့ ထောင်ဒဏ် ၁၀-နှစ်
ဓာတ်တိုင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးစာရွက် ကပ်မိလို့ ထောင်ဒဏ် ၅-နှစ်
ပြည်ပအသံလွှင့်ဌာနကို သတင်းပို့လို့ ထောင်ဒဏ် ၁၀-နှစ်
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်းကဗျာစပ်လို့ ထောင်ဒဏ် ၅-နှစ်
နယ်စပ်ကို ဒုက္ခသည် နှစ်သန်းကျော်ပို့မိတယ်။
ပြည်ပတရားမ၀င် အလုပ်သမား နှစ်သန်းကျော်ထွက်အောင် လုပ်မိတယ်။
နားဂစ်မှာ လူနှစ်သန်းလောက်ကို ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့မိတယ်။
ရတဲ့နေရာကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးယူသွားကြတဲ့။
ရွေးကောက်ပွဲက လွဲရင် တခြားနည်းလမ်းမရှိပါတဲ့။
မြန်မာတွေ ဈေးပေါတဲ့ ဖာ, ဖြစ်ကုန်ပြီ။
မြန်မာတွေ ဈေးပေါတဲ့ ကျွန်ဖြစ်ကုန်ပြီ။
မြန်မာတွေ မတရားတာ၊ တရားတာမသိ ပေါက်ကုန်ကြပြီ။
နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ မြန်မာတွေရဲ့ အုံးနှောက်ကို စစ်ဘီလူးတွေဖောက်စားလို့ ဗလာဖြစ်ကုန်ကြပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုကို မတွေ့လို့ပါ။
မှားနေတဲ့လူတွေဟာ..ဘယ်တော့မှ မှန်နေတဲ့လူတွေကို မျက်နှာချင်း မဆိုင်ရဲဘူး။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ စိတ်ကနေ အလိုအလိုကြောက်နေတာ။ ရာဇ၀တ်ဘေး ပြေးမလွတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပုဒ်ထဲကလိုပေါ့။ ရဲတွေ့ရင် သူခိုးတွေ အလိုလိုမျက်နှာပျက်၊ လက်တွေတုန်၊ အသံတုန်ပြီး ဟန်ပန်ပျက်နေပြီ။ ဒါက လူ့စိတ်ကိုဖုံးဖိလို့ မရဘူးဆိုတာကို ပြတယ်။
နအဖက အမှားတွေလုပ်ထားတယ်။ အမှန်တရားဘက်က ဘက်တော်သားတွေကို ဒီလူတွေ ရင်မဆိုင်ရဲဘူး။ ဥပမာ-
စစ်အာဏာရှင်မပြောနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အစွယ်အပွားတွေတောင် ပြည်ပကိုထင်ထင်ပေါ်ပေါ် မလာရဲဘူး။ သူတို့ဖင်ခေါင်းကျယ်နိုင်တဲ့နေရာကတော့ မြန်မာပြည်တ၀ိုက်ပဲရှိတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကို ၀,လုံးခေါင်းထဲ လသာတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်လို့ လည်းသုံးနိုင်တယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ရန်ဖြစ်ရင် "မင်းက မင်းအိမ်မို့လို့ ဂန်ကျယ်တာလား" လို့ ခလေးအချင်းချင်းပြောတယ်။ အခုလည်း နအဖပုံစံက အဲလိုဖြစ်နေတယ်။ သူ့အိမ်ရောက်မှ ဒီကောင်သတ္တိရှိရဲတယ်။ လူတွေကို -ီးထင်တဲ့အပေါက်မျိုးချိုးတယ်။ မိုက်ရိုင်းတယ်။ လက်နက်အားကို၊ လူမိုက်အားကိုးနဲ့ဆိုတော့ သတ္တိအပြည့်။ ဒီလူတွေ ပြည်ပနိုင်ငံလည်းထွက်ရော မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်လို..ဟိုဂျောင်ကတ်ဒီဂျောင်ကတ်နဲ့ နေစရာနေရာကို မရှိဘူး။ အမှီးတကုပ်ကုပ်နဲ့။
ဒီလိုဖြစ်နေတာက စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့  ကြောက်စိတ်ကိုပြတာပဲ။ ဒီကောင်တွေ ကျနော်တို့ကို လက်နက်အားကိုးနဲ့ပဲ အနိုင်ကျင့်ရဲတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ နှလုံးရည်နဲ့ယှဉ်တဲ့အခါမှာတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။
ဘယ်တော့မှ စစ်အာဏာရှင်တွေအသာစီးမရဘူး။ ရိုးရိုးလေးပြောရင် အတိုက်အခံအင်အားစု နဲ့ ပြည်သူကို မနိုင်ဘူး။ အခုလက်ရှိအနေအထားကိုပြောတာပဲ။ အထက်ပြောတဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်။ သူတို့စိတ်ကိုတောင် သူတို့မနိုင်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ပြီး ပျော့မယ်လိုထင်တဲ့လူတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးနေတာပဲ။ ဒီလူတွေအများစုက မသထာရေစာကို အတူတူမျိုထားတဲ့လူတွေအချင်းချင်းပဲဆိုတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်က မျှောင်ပင့်ပြီးပေါင်းစားဖို့ မလုပ်ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ဓမြဂိုဏ်းသားတွေလိုပဲ။ ဓမြတိုက်ပြီး အချင်းချင်းဝေစုမတည့်တဲ့အခါမှာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကသတ်ပြီး လုယှက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို အပိုင်စီးဖို့ကြံလိမ့်မယ်။ ဒါကို အသေကြောက်တယ်။ ဒါက သူတို့အချင်းချင်းအပိုင်း။
ပြည်သူလူထုက သူတို့နဲ့ပက်သက်လာရင် ဘယ်တော့မှနှစ်မြို့ တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သူတို့လည်းသိတယ်။ တခါတုန်းက စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ရင်းတခုက ဗိုလ်မှုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖူးတယ်။ သူက "ငါ..ဘယ်တုန်းကမှ သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး" တဲ့။ ဒါကို စစ်တပ်က အရာရှိတွေသိတယ်။ ရဲဘော်တွေနားလည်တယ်။ သာမန်အရပ်သားမပြောနဲ့ သူတို့တောင် မထောက်ခံတာပဲ..။ အဖြေက ရှင်းနေပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူပြောလဲ။ စစ်အာဏာရှင်တွေအသာစီးရနေတယ်လို့။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူတွေရဲ့  ဆင်ခြေ
ပြည်သူတွေဟာ လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်ကတည်းက အာဏာရှင်လက်အောက်မှာနေသားကြနေပြီ။ ငပိရည်နဲ့လည်း နေ့တိုင်းမျိုခဲ့ပြီးပီ။ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်ဆိုတာ သူတို့အတွက် ဘီယာနဲ့နေ့တိုင်းမြည်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက သူတို့အတွက် အဓိကဟင်းဖြစ်တယ်။ ပြည်သူအများစုက ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဆင်းရဲ နုံချာစုတ်ပြတ်ပြီး နလဗိန်းတုံးလိုမျိုးဖြစ်နေပြီ။ ဒီအခြေအနေကို ပြည်သူကနေသားကြနေပြီ။
ဒါတွေကိုသိရက်သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့များ လက်လျှော့ချင်တဲ့စကားတွေကို ပြောရတာလဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုကြည့်ပါ..ပြည်သူတွေဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကာလ၊ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကာလမှ မတိုးတက်တော့ဘူး..ဘာညာ..ဒီတော့ ရတဲ့လမ်းကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ကြတာပေါ့..လို့ဆင်ခြေပေးကြတယ်...။ နောက်ဆုံးပြောမယ်..။ ပြည်သူတွေမှာ ဘာများထက်ပြီး သူတို့အတွက် ဆုံးရှုံးစရာရှိတော့လို့လဲ။ ရှိတာဆိုလို့ -ီးနဲ့သွားပဲရှိတယ်။ သွားးတောင် သွားတိုက်ဆေးမ၀ယ်နိုင်လို့ ကျိုးကုန်ပြီ။
ပြည်ပမှာ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီရနေပြီ
ပြည်ပမှာလာပြီး စစ်တပ်က ၂၅% ပါလီမန်မှာနေရာလိုချင်လို့ပါ။ လွတ်ငြိမ်းချမ်သာခွင့်တို့၊ ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ထောက်ခံဖို့တို့ ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစိ လာမလုပ်ရဲဘူး။ ဒါတွေက နဲနဲမြင့်သေးတယ်။ အာရုဏ်ဦးမှာဖူးတဲ့ကြာက လူတွေကိုတောင် ပြည်ပက မြန်မာပြည်သူတွေ လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူး။ ဒါက အနုပညာရှင်တွေကိစ္စ။
ပြည်ပမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေ ဗမာပြည်မှာလို လမ်းပေါ်မှာ ဘယ်သူ့မှ လူမထင်တဲ့အပေါက်နဲ့ မျက်စိနောက်အောင် မလုပ်ရဲဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာ ဘယ်တုန်းကတွေ့ဘူးလဲ။ နယူးယောက်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးညဏ်ဝင်းလာတုန်းက ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်ခံရတယ် မဟုတ်လား။ နှမစောင်း ကားပေါ်ကနေ ကြောက်နေလိုက်တာ သေတော့မဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒါတောင် ပြည်ပက လူတွေက ရဲဖမ်းမှာဆိုလို့ လျှော့ထားတာ။ စင်္ကာပူကိုကြည့်၊ မလေးရှားကိုကြည့်၊ ဂျပန်ကို ကြည့်၊ ဘယ်မှာကြည့်ကြည့် စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက် ပြေးစရာမြေမရှိဘူး။ ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား ဒီကောင်တွေကို လက်မခံတဲ့သူတွေကြီးပဲ။ ဒါကို စစ်အာဏာရှင်တွေသိတယ်။ သိလည်းစွပ်ပြီးမိုက်ချင်နေကြတယ်။ သူတို့မိုက်တာက ပြသနာမရှိဘူး၊ လူမိုက်အားပေးတွေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာက ပိုဆိုးတယ်။ သူတို့လည်း ပြည်ပထွက်ရင် သတိသာထားပြီးထွက်ပေါ့။
ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေပေါင်းရင်း ရန်ကုန်လူဦးရေထက်တောင်ကျော်နိုင်တယ်။ပြည်တွင်း၊ပြည်ပက အသိပညာရှင် အတက်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီး တိုင်ပြည်ကို တည်ထောင်ခွင့်ရရင် မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်တော့မှ သူများအနှိမ်ခံရတဲ့ ဘ၀ကိုရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ။ အခုကြတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ စောက်ရှုးတွေ။ မောင်စူးစမ်းလဲစောက်ရှုး။ အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးဘူး။
အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်တာက အရှုံးပေးတာပဲ။ ဒီနေရာမှာ ဘာမှလာပြီး မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနန်းတို့၊ Kiss ပေးတာတို့ ဘာညာလာမလုပ်နဲ့။ ဒါကနိုင်ငံရေး။ ဟင်းရွက်ကန်ဇွန်းရွက်လို လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး ပါလီမန်မှာတက်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်း။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်။ ဒီပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှ ကျနော်တို့တိုင်းပြည် ၁၀၀% လွတ်လပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်နိုင်မလဲ။ ဒါကို မောင်စူးစမ်းက Alternative လို့ခေါ်တာလား။ ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ဖို့ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ထပ်ပြီးစောင့်ရအုံးမှာလား။ ဒီအချိန်ဆို အားလုံးက မြေဆွေးဖြစ်နေပြီ။
အခုကျနော်တို့နိုင်နေတယ်။ ဦးတင်ဦးစင်္ကာပူမှာ မျက်စိလာပြီးကုတယ်။ သူ့ကို ဂါဝရပြုတဲ့သူနဲ့၊ ကန်တော့နဲ့သူနဲ့ စုံလို့။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးညဏ်ဝင်းကို နယူးယောက်က လူတွေဂါဝရပြုလား။ ဖိနပ်စာပဲကျွေးတယ်မှတ်လား။ ဘယ်နေရာသွားသွား စစ်အာဏာရှင်တွေအတွက် ပြေးစရာမြေမရှိဘူး။ သူတို့ဂန်ကျယ်လို့ရတာက နေပြည်တော်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါတောင် သူတို့စည်းဝိုင်းထဲမှာပဲ ဂန်ကျယ်နိုင်တယ်။ ဒါလားသူတို့နိုင်တာ။
အခုလောလောဆယ် စစ်အစိုးရက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ လုံးဝရှုံးနေပြီ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကြည့်အုံး။ အသက် ၇၇-နှစ်အရွယ်။ နေ့လားညလားမသိဘူး။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အမှန်တရားဆိုတာ တခုပဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်နေတာကို ရှုံးအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ ညှပ်စားပွဲကိုဝင်ပြီး ထပ်ရှုံးအောင် ပုံအောလောင်းကြပေါ့ဗျာ။ ဒီလောက်ပါပဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, October 16, 2010
"ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ကဗျာ"
ဂေါက်..နေတဲ့ လူသတ်သမားတွေကို သတိထား...။